Uphelile umbango werenti koweVibe FM neK-Cap
UMPHATHI wesikhungo iK-Cap, u-Edmund Mhlongo okuvele ukuthi usethelelene amanzi noweVibe FM abebebanga naye irenti. Isithombe: FACEBOOK / EDMUND MHLONGO
THOKOZANI NDLOVU | September 2, 2019
UMPHATHI wesiteshi somsakazo womphakathi iVibe FM nowesikhungo sezobuciko iK-Cap, abebebanga imali yerenti okuthiwa ikweletwa wumsakazo bagcine ngokuthelelana amanzi.
Umbango werenti ubusufakwe nakubameli.
Okhulumela isikhungo iK-Cap, uToki Mohoto uveze ukuthi sebekhumelene umlotha nomphathi weVibe FM, uLucky Dlamini ngemuva komhlangano ababe nawo olekelele ekutheni kulungiswe amaphutha.
“UDlamini uzilethile izitatimende ebeziveza indlela obekukhokhwa ngayo irenti. Kukhona lapho obekuvela khona ukuthi kunezikhala kodwa wawavuma lawo maphutha. Wenze ubudoda ngokuthi alivume iphutha elenzeke kwezinye izinyanga.
“Ukube nasekuqaleni sasixoxe kanje sasingeke sithathe ngisho nesinyathelo sokuya kubameli kodwa sasizoxoxisana nje ukuthi sisilungisa kanjani isimo.
“Kumanje yonke into isisingethwe wumnyango wezimali eK-Cap ukulungisa amaphutha enzekile bese kuqhutshekwa nempilo,” kusho uToki.
ULucky ukuqinisekisile ukuthi sebexoxile neK-Cap futhi yonke into isihamba kahle phakathi kwabo.
“Ngizihambisile izitatimende ebeziqinisekisa ukuthi irenti ibikhokhwa. Libe khona iphutha lokuthi kube nemali engabonakali ukuthi yakhokhwa mhlawumbe nakhona okuyinyanga eyodwa uma ngingaphosisi. Inkinga kube ukuthi singasitholi esinye isitatimende ebesizocacisa lokho. Kumanje yonke into isihamba kahle futhi siyasebenzisana nesikhungo,” kusho uLucky.
Uthe okuqinisekisa ukuthi sebese-benzisana kahle nesikhungo wukuthi kunomcimbi weVibe FM okhuluma ngamasiko ehlukene ozoba ngoSepthemba 24 eK-Cap.
“Kulo mcimbi sisebenzisana nayo iK-Cap futhi isinike indawo yokuthi sibe nalo mcimbi. Sinxusa ukuthi abantu bafike bevunule ngokobuzwe babo uma beze emcimbini. Zonke izinhlanga zamukelekile ukuthi zibe yingxenye yawo futhi kuzobe kungenwa mahhala,” kuphetha uLucky.